Vanotengesera Mumigwagwa Voramba Kurudziro yeKanzuru Yekuti Vabude Muguta
Vanotengesa michero mumigwagwa muHarare
Kanzuru yakazivisa kuti kubva svondo rino ichange ichibvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa pamwe nevanotengesa vasina mvumo sezvo pachityirwa kuti vanhu vanogona kubata chirwere cheTyphoid icho chanetsa muguta.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobvuma kubva munzvimbo dzavari kushandira, sezviri kurongwa nekanzuru yeguta iri mukuedza kwayo kudzivirira kupararira kwechirwere cheTyphoid.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa, reVendors’ Initiative for Social and Economic Transformation (Viset), VaSamuel Wadzayi, vanoti nhengo dzavo dzicharamba kubviswa mukati meguta sezvo dzisina kumwe kwekushandira.
Kanzuru yakazivisa kuti ichabatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police mukuita basa iri.
Kusvika Chishanu chapfuura, vanhu vaviri vanonzi vakafa nechirwere ichi uye vanhu vanosvika makumi maviri vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi.
Vamwe vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu vari kufungidzirwawo kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere ichi.
Hurumende svondo rapera yakaumba komiti yemapazi ehurumende pamwe nameya weHarare kuti vaone nezvekurwisana nechirwere ichi.
Matanho ekutanga akatorwa nekomiti iyi kurambidza kutengeswa kwemichero uye kukurudzira vagari kuti vaite hutsanana.
VaWadzayi vanoti sevanhu vari kutsvaga kurarama, havana kuramba kubviswa munzvimbo dzavari kutengesera, asi kuti vari kuti kukanzuru tipeyi nzvimbo dzekutengesera dzine mvura nezvimbudzi.
Vanoti sesangano vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzitakure mvura kubva kudzimba kuitira kugeza michero nemiriwo zvavanenge vachitengesa.
VaWadzayi vanotiwo nhengo dzavo dziri kusiya dzatsvaira nzvimbo dzadzinotengesera.
"Isusu tiri ku maker shuwa kuti patinotengesera pakachena, tino cleaner kana tabva patinotengesera. Eeh, isusu seVISET tiri kukurudzira ma members edu auye nemvura yekushandisa kwavanobva, vachisuka, kana vanotengesa ma vegetables, vanotengesera vanhu vabva kumasuka. Saka manyepo ekuti hanzi hatisi ku cleaner zvatiri kutengesa," VaWadzayi vanodaro.